Xisaabiyaha guud ee Puntland oo shirkadaha daabacadda u jeediyay in aysan samayn karin dikumeentiyada lacagta ee dowladda – Kalfadhi
Xisaabiyaha guud ee Puntland Cabdirisaaq Siciid Nuur ayaa maanta faray shirkadaha daabacadda ee Puntland in aysan samayn karin buugaagta lacag bixinta, kuwa lacag qabasahda iyo kuwa ay lacagtu ku waajibtay ee ay isticmaalaan xafiisiyada kala duwan ee dowladdu, ilaa uu xisaabiyuhu ogolaado.
Warqad ka soo baxday xafiiskiisa ayuu ku sheegay in loo baahan yahay in xafiisyada kala duwan ee dowladu ay maraan habraaca maamulka iyo maaliyadda ee dowladda Puntland, kaas oo dhigaya in dikumeentiyada qiimaysan ee lacagaha lagu qabto laguna baxsho dalabkooda koowaad iyo dib u daabacashoodaba loo maro ogolaansho qoraal ah oo ka soo baxa xafiiska xisaabiyaha guud.
Buugaagta aysan madbacaduhu daabici doonin ogolaansho la’aan waxaa ka mid ah kuwa lagu qaado canshuuraha, dakhli hoosaadyada, khidmadaha, diiwaangelinada, lacag bixinada, shatiyada iyo wixii la mid ah.
Xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda ayaa qorshaynaya inuu guddi qiimeeya arrintaas iyo sida loo fuliyay u diro xafiisyada kala duwan ee dowladda, sida lagu sheegay qoraalka.
Docda kale, xisaabiyaha guud ayaa faray hay’adaha dowladda in ay xafidaan warqadaha la isticmaalay ee dikumeentiyadaas ka midka ah, si ay u fududaato in la helo hadii uu baaris samaynayo hanti-dhawrka guud ee dowladdu.
Xafiisyada kala duwan ee dowladda heer dhexe ilaa heer degmo ayaa qaarkood waxay isticmaalaan dikumeentiyo ay si gaar ah u daabacdeen.
Xildhibaan C/rashiid Xidig "Taariikhda ayaa xusi doonto wixii maanta Kismaayo loogu geestay taageerayaasheyda"